Real Madrid ayaa ogaatay xaaladda dhabta ah ee dhaawacii soo gaadhay goolhayaheeda Thibaut Courtois oo garoonka laga saaray xilli uu tababar la qaadanayey xulka qaranka Belgium.
Courtois oo laf-dhabar u ah Real Madrid ayaan si dhab ah hore loogu shaacinin muddada uu garoomada ka maqnaan doono iyadoo uu dhaawacuna kasoo gaadhay muruqa lugta hoose oo booday xilli uu tababarka ku jiray, taas oo Los Blancos ku noqotay naxdin maadaama ay ciyaaro adag kusoo fool leeyihiin.
Zinedine Zidane ayaa xiddigaha kooxdiisa u ciyaarinaya ciyaarta ay Sabtida ku waajahayaan kooxda yar ee Cadiz oo ay ugu xigayaan Shakhtar Donetsk oo kulanka koowaad ee Champions League ee xili ciyaareedkan ay ku bilaabanayaan ah iyo ciyaarta adag ee El Clasico ee Barcelona ay wada ciyaari doonaan October 24.
Courtois oo maqnaanshihiisu dhibaato weyn ku yahay Real Madrid ayaan qayb ka ahayn ciyaartoyda Belgium ee England la ciyaaray toddobaadkan, laakiin waxay wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay xaaladdiisu farxad gelinayaan Zinedine Zidane.
Sida uu ku warramay wargeyska Marca ee kasoo baxa magaalada Madrid, goolhayahan ayaanay xaaladdiisa dhaawacu aad u xumayn markii horeba, waxaana uu maalmo gudahood kaga soo kabanayaa dhaawaca muruqa ah.
Courtois oo kusoo laabtay magaalada Madrid markii uu dhaawacu gaadhay oo iskaga yimid xulka qarankiisa Belgium ayaa la sheegay inuu si buuxda uga soo kabtay dhaawaca oo uu diyaar u yahay ciyaarta Cadiz ee Sabtida, taas oo haddii uu ciyaaro Zidane u damaanad qaadaysa inuu ku xisaabtamo kulanka Shakhtar Donetsk iyo Barcelona intaba.
Goolhayahan hore ee Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ahaa mid tiir dhexaad u ah Real Madrid oo goolal badan oo laga dhalin lahaa haddii aanu isagu joogi lahayn.
Saddex ka mid ah afartii ciyaarood ee LaLiga ee Real Madrid ay ciyaartay ayuu shabaqiisa nadiif ka dhigay iyadoo waliba uu waajahay khataro badan oo goolal noqon karayay.
Si kastaba, Zinedine Zidane ayuu warkani u yahay farxad, iyadoo uu hore ugu soo kacay Toni Kroos oo kulanka Germany iyo Switzerland ciyaaray.